निशान, गोपाल र अजयका हत्यारा जिम्मेवारको ? अब अर्थ मन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्ने ? - Enepalese.com
निशान, गोपाल र अजयका हत्यारा जिम्मेवारको ? अब अर्थ मन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्ने ?
इनेप्लिज २०७५ साउन २५ गते १:०५ मा प्रकाशित
एकबहादुर क्षत्री ,आइतबार साँझ काँडाघारीबाट ११ वर्षीय बालक निशान खड्का अपहरित भएका थिए र निजको हत्या भयो कथित अपराधी नुवाकोटका गोपाल तामाङ र अजय तामाङको प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। ४० लाख को नोटको कारण तीन परिवारमा नेपालीको अतुलनीय क्षति भयो। अझ अरु पनि हुनसक्ने छ र कस कसको जागिर जाने हो? नेपालमा लाखौ नेपालीहरु आफू वा नातेदार कहिले अपरहणमा परिने हो भन्ने त्राश छ । र ,अपरहणकार्य त पेशा नै भएका छन् । कति अपरहण त बाहिर आएका छैनन कतिले रकम फिरौती दिएर पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
किन अपराध भयो, को हुन् अपराधी, किन र कसरि भएका छन् कसरि रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नु जरुरि छ।
किन अपराध भयो ? नोट को बोरामा पैसा कमाई गर्न गरिएको हो । अरु कुनै उदेश्यले होइन धेरै अपराध यस्तै उदेस्य को लागि हुने गरेको छ । चाहे मानब बेच बिखन होस्, लागु औषधिको कारोबार वा घुस लिने दिने।
को हुन् अपराधी ? गोपाल तामाङ र अजय तामाङ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारियता पनि खास तिनीहरु कानून त् अपराधी नै थिए । तर तिनीहरुले देश परिस्थिति अनुसार आफनो पेशा हजारौले छिटै धन आउने पेशा गरेका थिए, सो गर्न राज्यले छुट दिएकै मान्नु पर्छ नत्र कसरि भै राखेको छ छुट नदिएको भए त् हुने नै थिएन।
राज्यले ले सो नहुने ब्यबस्था गरेको छैन। छ भने किन त भै राखेको छ ? ति दुई खास अपराधीहरु् हैनन । छायाँ मात्र हुन्। उनीहरु मारिएर तर अपहरण रोकिने वाला छैन।
को त ? गृह मन्त्रि रामबहादुर बादल र प्रहरी महानिरक्षक सर्बेन्द्र खनाल जसले अपराध रोक्न जिम्मेवार लिएर बसेका छन। अपराध त निर्मूल हुनु भन्दा बढेको छ । कहिले सिटामोलले ज्वरो मात्र कम गरे जस्तै बादल र खनालको हुकारले केहि समयको लागि भएको छ होला ? अहिलेको स्थितिमा प्रहरीको साधन र श्रोत १० गुना बढाएर कार्य क्षमतामा बृदि गरेपनि अपराध आधामात्र घट्ने छ।
सिमित साधन र श्रोतमा भएकोमा झन् प्रहरी निकाएमा कारोबार रेकर्ड नहुने नोटको कारोबारले अपराध बढी भएको र समातिएका पनि प्रमाण नभएको भनि छाडि दिनु पर्ने र भएको छ । जस्ले गर्दा हजारौ प्रहरी रातो दिन जनताको सेवामा खटेकाले जनताबाट उनीहरुले गरेको कामको इज्ज़त भएको छैन । घुस लिन दिने व्यवस्था कायम गरि प्रहरीलाई नै भ्रस्ट गराउने तिर लागि पढेका छन ।
त्यसैले बादल र खनालले रोक्न चाहेर अपराध बिशेष छडी प्रयोग नगरी सक्ने सम्भब छैन। सो छडी निजहरुको हातमा छैन । यिनीहरुले बिशेष छडी प्रयोग गरि अहिलेको आधा साधन र श्रोतबाट नै ९०% अपराध निर्मूल गर्न सकने छन। तसर्थ यी दुबैलाई अपराधी को सुचीमा राखेको छैन ।
सबैका अपराधीहरु तीन महापुरुष महोदय अर्थ मन्त्रि डाक्टर युबराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरन्जिबी नेपाल र नेपाल बैंकर संघ अध्यक्ष बरिष्ठ सी. ए. ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगना हुन्।
खास अपराध गर्ने अपराधीहरु खल नायक हुन् र अपराधीहरुलाई अपराध गर्न सिकाउने र प्रोत्सहान गर्ने समेत यिनैहरु हुन् । नोटको कारोबार नियन्त्रित रुपमा अपराधमा उपयोग नहुने गरि जनतालाई बिशेष बैंक सेवा उपलब्ध गराउने छडी तिनैको हातमा छ। अब छडी आफै माथि प्रयोग हुने सम्भावना त्यतिकै छ ।
अपराधको लागि साधनको रुपमा गभर्नर डाक्टर चिरन्जिबी नेपालले हस्ताक्षर भएको नोट बैंकबाट झिकेर बोरामा राखी लेन देन गरि अपरण गर्नको लागि उपयोग भै राखेको छ। नोट एक बस्तु भयो सो को उपयोग जथाभाबी हुन् भएन सो को जिम्मेवार व्यक्तिले सहि ठाउँमा मात्र उपयोग हुने ब्यबस्था तिनीहरुले नै गर्नु पर्छ।
सो गर्न र गराउनको लागि तीनै जना जिम्मेवार छन् । मूल नायक अर्थ मन्त्रि हुन्। हालैको अपरहणको जिम्मेवार अर्थ मन्त्रिले लिनु पर्दछ । निजकै कारण तिन जनाको ज्यान गयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लडेको भन्ने शेरबहादुर तामाङले त् काम गर्दा गर्दै कसैको ज्यान नगएता पनि पदबाट राजिनामा दि निकाश दिए ।
अर्थ मन्त्रिले निजकै कारण ३ जनाको ज्यान जघन्य अपराधबाट गुमाउनु परेकोमा मन्त्रि पदबाट राजिनामा दिनु पर्दछ। यो नै देश बाट अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खम्बा हुनेछ।
जनताले बुझी सकेका छन् अपराध र भ्रष्टाचार शुन्य हुनु पर्छ नियन्त्रणका लागि नोटको कारोबार नियन्त्रण न गरि हुदैन। यो बाहेक अरु उपाय छैन यो जनताको आवाज हो।